☺ ငြိမ်းဇေဦး : Sep 3, 2008
မိုးကြိုပန်းတွေ ပွင့် ကြမယ်
မိုးပြိုသွား တဲ့အခါမျိုးမှာ ဒေါင်းပြီဟေ့ အော်ရင်း
ဖဲတချပ်ချင်း ခင်းကြတယ် ။
ရင်ခံနေသူများ ကယ်တင်ရှင် အသင့်
ဒီမှာပဲ လောကပါလ တရားဟာ
ကမ္ဘာကြီးကို စင်္ကြ၀ဠာထဲထိ အငှားဆွဲလာခဲ့တာ
ဒီတခါပဲမှားဖူးပါတယ် တဲ့။
ဘာမှ ထပ် စောဒက တက်ဖို့မရှိပါဘူး…..။
ဆောင်းဦးရွက်ကြွေတွေ ကြွေ ကြွေ ကျ လာလိုက်တာ ..။
ဟိုးအနောက်ဖက် က မှိုင်းညို့ အုံ့ဆိုင်းနေတဲ့ကောင်းကင်ပြင်ကြီးကတောင် ဥပေက္ခာပြုလို့။
ငါဟာမြစ်တစင်းဖြစ်ချင်ခဲ့သူပါ။ ငါ့ခန္ဓာကို ငါ့ဒဏ်ရာလုပ်လို့ ……..ငါ့မျက်ရည်တွေ ငါ့ကိုယ်ပေါ် ဖြတ်စီးဆင်းလို့..။
ငါ့ကို ချုပ်နှောင်ထားတဲ့ ကာလသုံးပါးကိုလဲ တဟားဟား နာကျင်လှိုက်မော ထီမထင်စွာရယ်ရင်း စီးဆင်းပစ်ဖို့…။
ငါဟာချစ်မြတ်နိုးတတ်သူပါ…။ ငါဟာ ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသူပါ..။ ငါမသေချာတာကတော့ ငါ ချစ်မြတ်နိုးခြင်း ခံခဲ့ရဖူးသလားဆိုတာ..။
ငါ တန်ဘိုးထားခြင်း ခံခဲ့ရဖူးသလားဆိုတာ…။ ငါ တမ်းတလွမ်းဆွတ်ခြင်းခံခဲ့ရဖူးသလားဆိုတာ…။
ငါမသိဘူး… တကယ်တော့ ငါ ဟာ တကယ်ကိုဘာမှ ကျကျ နန မသိ သူ ပါ။
ဟိုးတုန်းက သစ်ခွပန်းရိုင်းတွေ အခိုင်လိုက် အဆုပ်လိုက်ပွင့်နေတဲ့သစ်ပင်ကြီးတွေအောက် ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ငါဟာဘယ်သူ့ကိုပေးရမယ် မသိပေမယ့် အဲဒီ သစ်ခွရိုင်း ပင်တွေကို ခဲရာခဲဆစ် တက်ခူးခဲ့ပြီးတိုင်း ငါ့ရဲ့ ကျောပိုးအိတ်ပေါ်မှာချိတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရင်းပျော်တတ်သူပါ။
တောင်ကုန်းတခုခု သို့မဟုတ်ဆင်ခြေလျှောတောင်စောင်းတခုခုမှာတွေ့တတ်တဲ့ ကျောက်ပုံစေတီလေးတွေနားမှာ
ငါခူးခဲ့တဲ့သစ်ခွရိုင်းတွေကို ဆက်ကပ်ခဲ့ရင်း သီချင်းလေး တအေးအေးနဲ့ ကြည်နူးတတ်ခဲ့သူပါ။
ငါ့ကို ငါ့အမေ က ပြောဖူးတယ် အင်မတန်နူးညံ့တဲ့ငါ့သားတဲ့ အင်မတန်သိမ်မွေ့တဲ့ငါ့သားတဲ့ ….ခုများတော့ငါဟာ ကျားနာတကောင်လို ချောင်တခုမှာ တယောက်ထဲ နာကျင် ငြိမ်သက်တတ်ခဲ့ရပြီ။ ငါ့အပြုံးတွေကို မျက်နှာသစ်ရင်တောင် ရေချိုးခန်း မှန်ရှေ့မှာ ရှာမတွေ့တော့လောက်အောင် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီ။ငါ့မှာရံဖန်ရံခါ နာတတ်တဲ့ စိတ်ကလွဲလို့ ဘာမှမခံစားတတ်တော့လောက်အောင် ငါ ပြိုကျခဲ့ရပြီပေါ့…………။
ငါ ဟာ ရေတံခွန် ကြီးတွေကိုတွေ့တိုင်း အဲဒီရေတံခွန်ကြီးတွေ ရဲ့ အသံကို နားစွင့်စရာမလိုပေမယ့် နားစွင့်ခဲ့ဖူးတယ် ။ ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာပြန်မှုတွေနဲ့ရေတံခွန်ကြီးတွေရဲ့ ရေစီးသံတွေကို မြတ်နိုးခဲ့ဖူးတယ် ..။ပြီးတော့အဲဒီရေတံခွန်ကြီးတွေရဲ့ အပေါ်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တိုင်း အောက်ချင်းငှက်ကြီးတွေ အဖိုနဲ့အမ ယှဉ်တွဲပျံသွား တာမြင်ရရင် ငါ့ အတိတ် နိမိတ်ကောက်မှုတွေနဲ့ငါဟာ တစုံ တယောက်…………… ငါက ဘ၀ပေးချစ်သလို ငါ့ကိုချစ်မယ့် မိန်းကလေးတယောက်ကို စိတ်ကူးနဲ့လွမ်းခဲ့ဖူးတယ် ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ရေတံခွန်ကြီးရဲ့အောက်ခြေ ရေနက်ပိုင်းကို ငုံ့လို့အသက်မရှူပဲ ၊ ဟိုသည်မကူးခတ်ပဲ ငါ့ခေါင်းပေါ်ကို ထိုးဆင်း ခုန်ချလာတဲ့ ရေထုရဲ့အောက်မှာ ကြာနိုင်သမျှ ကြာအောင် နေကြည့်ခဲ့ဖူးတယ်။
ပြီးတော့ အဲလိုနေရင်း ငါများ သေသွားခဲ့ရင် ငါ့ချစ်သူကောင်မလေး ဘယ်လို တယောက်ထဲများ ကျန်နေရှာပါ့မလဲ
ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ရေအောက်ကြမ်းပြင်ကို အားကုန်ဆောင့် ရုန်းရင်း ရေမျက်နှာပြင်ပေါ် ပြန်ပြန်တက်ခဲ့ဖူးတယ်
ဒါပေမယ့်………အဲဒီရေတံခွန်ရဲ့ကမ်းပါးမှာ တစုံတယောက်မှ ရှိမနေခဲ့ပါဘူး…………..။ သံသရာနဲ့ယှဉ်ပြီး စွဲလန်းတတ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ ငါဟာ ငါ့ကိုယ်ငါ တုတ်နှောင်ခဲ့တာပါ ။ ငါ့ဘ၀ကို ငါ ထင်းရူးပင်လေးတပင်လို၊ ခရေပန်းတွေလို၊ ပုန်းညက်ပင်လေးတပင်လို၊ နွေအခါ ဖွေးဖွေးလှုပ်နေအောင် ပွင့်တတ်တဲ့ တမာပွင့်တွေလို
မှောင်တော့မှ သင်းပျံ့ရတဲ့ ညမွှေးပန်းတွေလို ၊ ငါမြတ်နိုးခဲ့ဖူးတယ် ။
ငါဟာပေးဆပ်ဝံ့ခဲ့တယ်… စာနာတတ်ဖူးတယ်…. မျိုသိပ်ခဲ့ဖူးတယ်….ဝမ်းနည်းစိတ်နဲ့ကြိတ်ပြီး နားလည်ပေးခဲ့ဖူးတယ်….
ငါ့စိတ်အစဉ်ဟာ မှိုင်းပြာညိုမှောင်တဲ့ မဲနယ်တောင်တန်းကြီးတွေလို ဘာကိုမှအပြစ်မဆိုပဲ တိမ်ညိုတွေကိုလဲ ထမ်းခဲ့ဖူးတယ်
ငါ့အပေါ်မှာ ရွာချ ပြီး ငါ့ဘ၀ကိုဖဲ့ထုတ်သွားခဲ့တာတောင် ငါဟာ အပြစ်မတင်တတ်ခဲ့လောက်အောင်လဲ အသေ တကောင်လို
ခုတော့ ငါ့ ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာ ဒဏ်ရာတွေ ပိုတိုးလာဖို့ အလဲထိုးမခံရမခြင်း ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်မသိပဲ ကုန်းရုန်းထနေတဲ့ လက်ရည်မမှီတဲ့ လက်ဝှေ့သမား လိုလောက ကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ငါဟာ အလူးလူးအလဲလဲ ဒယီးဒယိုင် ပြန်ပြန်ထရင်း ဆင်ခြင်စွမ်း
ငါဟာခုတော့ ထစ်ကနဲဆို ခုခံဖို့အသင့်ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။ အားလုံးကို သံသယနဲ့ကြည့်တတ်ခဲ့ရပြီ။ လောကကို နာကျင်စရာ ဖြစ်စဉ်လို့
သည်းခြေထဲ စွဲနစ်နေအောင် ဘ၀နဲ့ သိခဲ့ရပြီ ။
ကျန်နေရှာမလဲဆိုတဲ့ နောက်ဆံတင်းစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့ဖူးတာကို မေ့လျော့လို့ ………………….။
ငါ့ကိုပွေ့ဖက်တဲ့ အပျိုစင်လက်ကလေးကို ပုတ်ချရုန်းကန်ရင်း အမုန်းသံနဲ့ရန်လုပ် လို့ ကြောက်ကန်ကန်ပြေးခဲ့လိုက်မိတာ ငါ့ပြန်လမ်းငါမသိတော့တဲ့ သောကတောနက်ကြီးရဲ့အလည်မှာပေါ့…
ငါ့ရှေ့မှာ တော့ အင်မတန်ကြီးတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုလေ စီးနေလိုက်တာတဝေါဝေါနဲ့ …ငါ့ရီဝေမျက်လုံးတွေနဲ့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်တဲ့အခါ အောက်ချင်းငှက် တကောင်တလေမှရှိမနေခဲ့ဘူး….
ဒါပေမယ့် ဒီတခါတော့ငါဟာ ရေတံခွန်ရဲ့ စီးဆင်းသံကို ဘာသာပြန်ဖြစ်ခဲ့တော့မှာမဟုတ်သလို…………….
မပွင့်တဲ့ ဖြစ်စဉ် ညိုညစ်ညစ်က
ငါတို့ဟာ ကြိုးဝိုင်းထဲက သစ်ပင်တွေဖြစ်ခဲ့
အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ သစ်ပင်တွေ တဖုန်းဖုန်းပြိုလဲခဲ့
ပင်စည်ထွားထွား အနှစ်ပြည့်ပြည့်တွေကို တပိုင်းစီ ဖြတ်ခံကြရ
တခါမှ တိမ်ထုတွေကို မမြင်ဖူးတဲ့ အမြစ်တွေပါ အဖော်ခံကြရ
ယုန်သူငယ်လို ၊ သမင် ဒရယ်လို
ဒီအဖြစ်တွေကို တော့ တုန်လှုပ်ခြင်း အလျဉ်းမရှိပါဘူး
ရှင်သန်တယ်ထင်ရင်း ရေသောက်မြစ်တွေ ခြောက်သွေ့ခဲ့ရ
အစွမ်းကုန်အစိုးရခြင်းတွေစိမ်းစို ဖူးပွင့်ထွားကျိုင်းခွင့် သင်းသတ်ခံရ
ဒီမှာပဲ နေသားကျမှုတွေနဲ့ ကြိုးဝိုင်းထဲက သစ်ရိုင်းပင်တွေဟာ
ကျွန်းပင်တွေလဲပြိုတိုင်း လေလှိုင်းနဲ့ကတတ်ကြရဲ့…။